२०७४ माघ २४ गते १०:३९
बाँके । नेपालगन्जको पुरानो विद्यालय हो सरस्वती मावि । महिलाले मात्र अध्ययन गर्ने भएकाले मधेसी, मुस्लिम विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा पर्छ यो विद्यालय । सरस्वती माविमा कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय ९४ विद्यार्थी पढने गरेका छन् । त्यसमा १ सय ९९ जना अर्थात् २८ प्रतिशत विद्यार्थी मुस्लिम छन् । १० कक्षामा अध्यय ...
२०७४ माघ २४ गते १०:३७
७ वटा माविमा इ–हाजिरीको व्यवस्था
खोटाङ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले ७ वटा माविमा इ–हाजिरीको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयमा शिक्षकको उपस्थितिलाई नियमित गर्दै पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका माविमा इ–हाजिरीको व्यवस्था गरेको हो। खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तर उकास्न गाउँपालिकाले विश्वज्योती मावि लामीडाँ ...
२०७४ माघ २४ गते १०:३३
दलित समुदाय उच्च शिक्षाबाट वञ्चित
खोटाङ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि प ...
२०७४ माघ २४ गते १०:२८
चिनियाँ भाषा सिक्दै स्कुले विद्यार्थी
काठमाडौं । काठमाडौंको संगम चोकमा रहेको काठमाडौं प्रज्ञाकुञ्ज स्कुलका कक्षा चारका विद्यार्थीहरू कक्षामा चिनियाँ भाषा बोल्छन् । उनीहरूलाई चिनियाँ शिक्षिका अमबट रुले चिनियाँ भाषा मात्रै होइन चिनियाँ संस्कृति, खानपिन समेत सिकाउँछिन् । मंगलबार दिँउसो स्कुल प्रांगणमा शिक्षिका अमबटले विद्यार्थीहरूलाई ...
२०७४ माघ २४ गते १०:१५
सम्बन्धन अनियमिततामा ४३ लाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौँ । मेडिकल कलेज सम्बन्धन र सिट निर्धारण अनियमिततामा मुछिएका ४३ जनाको सूची प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतबाट प्राप्त सूचीअनुसार अख्तियारका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुखदेखि विभिन्न विश्वविद्यालयका चार उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । काठमाडौं ...
२०७४ माघ २३ गते १३:१६
दिपिका थापा रिमालउपाध्यक्ष, प्याब्सनप्रिन्सिपल, सिद्धार्थ विद्यापीठ मावि, गठ्ठाघर, भक्तपुर सामुदायिक र निजी विद्यालयमा के फरक छ ? मलाई त नाममा मात्रै फरक लाग्छ । वास्तविकतामा केही फरक छैन । चामल त्यही हो । भात पकाउने त्यही हो । एउटामा भात पकाउँदा सायद पानी बढी हालिन्छ । अलि–अलि गिलो हु ...
२०७४ माघ २३ गते १०:३७
'हाम्रोतिर पढेर राम्रो गरेको कोही भए पो पढ्नु ?'
रोल्पा । रोल्पा घर्तीगाउँको आसपास माडी खोलाको किनारै किनार निस्किएको शहिद मार्गमा दैनिक दर्जनौ साना ठुला मोटर धुलो उडाउदै वरपर गर्छन। त्यही धुलोका बीचमा स्थानीय किशोरीहरु डोको बोकेर नियमित दाउराको खोजीमा निस्कन्छन्। बिद्यालय देखेका तर अध्यनको खासै अनुभुती गर्न नपाएका उनीहरुको दैनिकी एकनासको छ। ...
२०७४ माघ २२ गते १९:१९
ढुंगाको बेञ्च, बगरमा पढाइ
काभ्रे । लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै नयाँ संविधान पछि तीनवटै तहको निर्वाचन भए पनि सिन्धुलीको शान्तिश्वरी गाविस ३ हालको घ्याङ्गलेक गाउँपालिकामा रहेको माटिखानी बालज्योती प्राथमिक विद्यालयका बालबालिकाहरु ढुंगालाई बेञ्च सम्झेर खोलाको बगरमा अध्ययन गरिरहेका छन् । दलित बस्तिमा रहेको उक्त विद्यालयको भवन ...
२०७४ माघ २२ गते १८:०६
सरकारी स्कुलका किताबमा अझै पञ्चायत, आएन सं‌घीयता र गणतन्त्र
काठमाडौं । देशमा गणतन्त्र आइसकेर सं‌घीयताको पनि अभ्यास भइसकेको अवस्थामा सरकारी स्कुलका पाठ्यक्रममा भने अझै पञ्चायतकालीन स‌ंरचनाबारे पढाई भइरहेको छ । प्राथमिक तहका नेपाली र सामाजिकसहितका पाठ्यपुस्तक लेखनका क्रममा गम्भीर लापरबाही गरेको भेटिएको छ । देश संघीयतामा गएर स्थानीय तहको अभ्यास ...
२०७४ माघ २२ गते १४:१६
बैतडी । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अनुसारको गुणस्तर नभएको गुनासो बेलाबेलामा आइरहन्छ । धेरै लगानीमा सञ्चालित सरकारी विद्यालय भन्दा थोरै लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालयको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । तर पछिल्लो समय नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विभागसँग सहकार्य गरी विभिन ...
२०७४ माघ २२ गते १४:०९
संखुवासभामा ९५ प्रतिशत साक्षर
संखुवासभा । संखुवासभामा ९५ दशमलव ६३ प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाको साक्षर तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। केन्द्रका कार्यक्रम उपनिर्देशक बालकृष्ण गैरेले सरकारले जारी गरेको १२ सूचकमध्ये ७ वटा स ...
२०७४ माघ २२ गते १४:०३
त्रिवि परीक्षाको सबै काम ‘ईएमआईएसमा’
काठमाडौँ  । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनलगायत सम्पूर्ण विवरण ‘परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा राख्ने भएको छ । ६ वर्ष लामो प्रयासपछि त्रिविले यो व्यवस्था आउँदो फागुन दोस्रो साताबाट कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । प्रविधिको ...
२०७४ माघ २२ गते १३:५८
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा अनियमितता गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित तीन पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्तको सिफा ...
२०७४ माघ २१ गते २०:२३
हिउँदमा मात्रै विद्यालय पुग्छन् विद्यार्थी
दमक । रतुवा नदी तरेपछि झापाबाट इलामको दक्षिणी गाउँ चुलाचुली पुगिन्छ । तर नदी तर्नासाथ झापाको एउटा गाउँ पर्छ, सिम्ले । सिम्ले कमल गाउँपालिका ५ मा पर्छ । चाजु र रतुना नदीले घरेको यो बस्तीमा दुई सय ५० घरधुरी छन् । सिम्लेका बालबालिका हिउँदमा मात्रै विद्यालय जान पाउँछन् । तीनतिरबाट खोलाले घेरेको बस् ...
२०७४ माघ २१ गते ०८:२७
विद्यार्थीले बनाए नमुना ‘स्मार्ट सिटी’
काठमाडौँ । कक्षा ९ मा पढ्ने पाँच विद्यार्थीले ‘स्मार्टसिटी’ को नमुना बनाएका छन् । चतरालाइनस्थित पब्लिक उच्च माविको मैदानमा बुधबार सुरु भएको विज्ञान प्रदर्शनी तथा शैक्षिक मेलामा उनीहरूको डिजाइन हेर्न विद्यार्थी झुम्मिएका छन् । पब्लिक स्कुलकै विद्यार्थीहरू संजोग बराइली, एलेक्स किरुवा, ...
२०७४ माघ २१ गते ०८:२५
फरक क्षमताका बालबालिका एकतिहाइ
दोलखा । विस्तारै कसैका हातगोडा लुला र अस्वाभाविक हुँदै जान्छन्, कसै कसैले कान सुन्दैनन्, कोही बोल्नै सक्दैनन् । कतिपयले अल्पायुमै ज्यानसमेत गुमाएका छन् । गौरीशंकर गाउँपालिका ८ खारेस्थित बाबेडाँडाका ८५ जना मध्येमा एकचौथाइ स्थानीय यस्तै फरक क्षमताले हुर्किरहेका छन् । कोही भुइँमा लडिरहेका छन ...
२०७४ माघ २१ गते ०८:२१
कक्षा ११ को नतिजा - प्रयोगात्मकमा ए प्लस, सैद्धान्तिकमा डी
काठमाडौँ  । विद्यालयहरूले प्रयोगात्मकमा विद्यार्थीको सिकाई क्षमताभन्दा बढी अंक दिने गरेको पाइएको छ । सैद्धान्तिकमा विषयमा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले समेत प्रयोगात्मकमा उच्च ग्रेड दिने गरेको पाइएको छ । यस्तो अवस्था निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयमा देखिएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के ...
२०७४ माघ २० गते ०९:४९
छाउपडिको विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव
दैलेख । दैलेख जिल्लामा जटिल समस्याको रुपमा लिइएको छाउपडि प्रर्था अन्त्यका लागि छाउपडि विषयलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न एक कार्यक्रममा सहभागिले सुझाव दिएका छन् । शुक्रवार दैलेख सदरमुकाममा संचारकर्मीहरु संग यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य र बाल अधिकारका सवालमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि ...
२०७४ माघ २० गते ०९:४०
लहान । अबदेखि सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडामा मदिरा बिक्री वितरण र भोजपुरी भाषाका अश्लील खालका गीत बजाए सम्बन्धित वडा कार्यालयले जरिवाना गर्ने भएको छ। साथै, बालबालिकाको मोबाइल र मोटरसाइकलमा बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न बालबालिकालाई मोबाइल प्रयोगमा रोक लगाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। ...
२०७४ माघ २० गते ०९:३६
विद्यार्थीले उडाए ‘ड्रोन’
काठमाडौं । काठमाडौंको एक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने विद्यार्थीले मानवरहित विमान (ड्रोन) बनाएका छन् । काडाँघारीस्थित अक्षरा स्कुलमा पढ्ने १३ वर्षीय केल्बिन संग्रौलाले सेन्सर रिमोट फ्रिक्वेन्सीमार्फत बनाएको ड्रोन उडाएका हुन् । उनले यो ड्रोन तीन महिना लगाएर बनाएको जानकारी दिए । उनले बनाएको ड्रोनले दु ...
२०७४ माघ १९ गते १०:५०
बैतडी । नगरपालिकासँग बजेट अपुग भएपछि बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले तीन महिना देखि तलब पाएका छैनन् । नगरपालिकाले दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा नगर्दा शिक्षकहरुले तलव नपाएका हुन । उनीहरु तलब समयमै उपलब्ध गराईदिन नगरपालिकासँग माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझ ...
२०७४ माघ १९ गते १०:३७
बालबालिकाको रोजाइ बाल क्लब
धादिङ । कक्षा ९ मा पढ्दै गरेका गोरक्ष हमाल धुनीबेसीमा नगरस्तरीय बाल क्लबका अध्यक्ष हुन् । सानैदेखि बाल क्लबमा बसेर आफ्नो प्रतिभा देखाउँदै आएका उनी क्लबमा बस्न पाउँदा खुसी छन् । पढाइलाई निरन्तरता दिँदै आएका उनको रोजाइमा बाल क्लब परेको छ । पढेर बचेको समय बाल क्लबमा लगानी गर्ने गरेको गोरक्ष बताउ ...
२०७४ माघ १९ गते १०:२०
चार वटा सामुदायिक विद्यालय ‘नमुना’ बनाइने
विराटनगर  । विराटनगर महानगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि नगरका चार वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । ती विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी माध्यमबाट र प्राविधिक शिक्षाको पढाइ हुनेछ । पहिलो चरणमा आउँदो शैक्षिक सत्रद ...
२०७४ माघ १९ गते १०:१६
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद थप्न आग्रह
काठमाडौं । पाँच महिनाअघि गठन भएको उच्च शिक्षा आयोगले चार महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले तल्लो तहसम्म पुगेर सुधारका लागि सुझाब संकलन गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका सदस्यसचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्स ...
२०७४ माघ १८ गते ११:०३
कक्षा ९ र १० को पूर्णांक घट्ने, ११ र १२ को बढ्ने
काठमाडौं । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहमा समायोजन गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप मस्यौदा तयार पारेको छ । केन्द्रले कक्षा १–३ को पाठ्यक्रम एकीकृत गर्ने, ९ र १० को पूर्णांक घटाउने र ११ र १२ को पूर्णांक बढाउने गरी मस्यौदा त ...
२०७४ माघ १८ गते ०९:०४
यसै वर्षदेखि खुला विश्वविद्यालयको पढाइ
काठमाडौं । कानुन बनेको डेढ वर्षपछि मुलुकमा पहिलो पटक खुला विश्वविद्यालयमार्फत पठनपाठन सुरु हुन लागेको छ। खुला विश्वविद्यालयमा आठ महिनाअघि मात्रै उपकुलपति तथा कुलसचिव (रजिस्ट्रार) नियुक्त भएका थिए। विश्वविद्यालयको सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म बसेको प्राज्ञिक परिषद्ले विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने सं ...
२०७४ माघ १८ गते ०८:४९
छाउपडीविरुद्ध विद्यार्थी संगठनको जागरण अभियान
अछाम । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि संयुक्त विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेताहरू जागरण अभियान लिएर अछाम पुगेका छन्। प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा व्याप्त छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जनचेतना जगाउन जागरण अभियान लिएर अछाम आएको संयुक्त विद्यार्थी स ...
२०७४ माघ १८ गते ०८:४५
दोलखा । बुधबार बिहानैदेखि चरीकोटको मौसम चिसो थियो । एकाबिहानै कठ्याङ्ग्रिने चिसोमा सातदोबाटो चोकमा स्कुले पोसाक लगाएका केही बालबालिका देखा परे । ७- ८ कक्षामा पढ्नेजस्ता देखिने उनीहरुले ग्यास चुलो, भाँडा र प्लास्टिकका गिलास निकाले अनि चुलो बाल्न सुरु गरे, भाँडामा पानी बसाले, चिनी, चियापत्त ...
२०७४ माघ १७ गते २२:३६
ललितपुर । फुल्चोकीमा हिउँ हेरेर फर्किने क्रममा एक साता अघि हराएका १७ वर्षीय बालक जाेन तामाङ भेटिएका छन् । उनी फुल्चोकी जंगलबाट सकुशल भेटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद सिलवालले बताए। सिलवालका अनुसार आफन्तले खोजी गर्ने क्रममा ति बालक भेटिएका हुन्। 'म बच्चा भेटि ...
२०७४ माघ १७ गते ११:०५
अख्तियारमा दाङका एक सय ६ मुद्दा : शिक्षा क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी मुद्दा
घोराही । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाङका एक सय ६ वटा भष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। विशेष अनुसन्धानमा केही दिनदेखि दाङमै रहेको अख्तियारको टोलीले यस्तो जानकारी दिएको हो। आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख ईश्वर कार्कीले कोहलपुरको क्षेत्राधिकारमा ...
२०७४ माघ १६ गते १२:०३
अब घरमै अध्ययन गरेर विश्वविद्यालयको डिग्री
काठमाडौं । नियमित रूपमा कलेज वा विश्वविद्यालयको कक्षामा जान नसक्नेले अब घरमै अध्ययन गरेर पिएचडीसम्मको डिग्री लिन पाउने भएका छन् । पहिलोपटक स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अब प्रविधिको प्रयोग गरी डिप्लोमादेखि पिएचडीसम्मको डिग्री दिने भएको हो । खुला विश्वविद्यालयको सोमबार बसेको प्राज्ञि ...
२०७४ माघ १६ गते १०:५१
११ हजार ४५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्
काठमाडौं । हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या उच्च देखिने गरेको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका करिब ८० हजार ६ सय ४६ शिक्षकमध्ये ११ हजार ४५५ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा शिक्षकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।&nb ...
२०७४ माघ १६ गते १०:२३
टाढा स्कुल जान गाह्रो, नजिक खोल्न गाह्रो
चितवन । मनबहादुर चेपाङ चितवनको पहाडी गाउँ सिद्धि रन्तेसस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हुन् । उनी १० वर्षका हुँदा कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तीन कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनको पढाइ छुट्यो । कक्षा ४ मा पढ्दा किताब किन्नुपथ्र्याे । ‘किताब किन्ने पैसा नहुँदा पढ्न ...
२०७४ माघ १५ गते २२:३८
संगठनमा आवद्ध शिक्षकले छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा नपढाउने
सिन्धुली । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सिन्धुलीमा आबद्ध शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई नीजी विद्यालयमा नपढाउने घोषणा गरेका छन् । सिन्धुलीमाडीका सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाँचौं सम्मेलनबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीले सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी ...
२०७४ माघ १४ गते ०७:५३
काठमाडौं । ललितपुरको थसिखेलस्थित अजय शिक्षा सदनमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी हाइकिङ गएर फर्कने क्रममा तीन दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। फुलचोकी डाँडामा गत बिहीबार हाइकिङ गएका कक्षा ५ र ६ का ११ जना विद्यार्थीमध्ये कक्षा ६ मा अध्ययनरत जोन तामाङ हराएका हुन्। फुलचोकी शिखरमा पुगेर ओरालो झर्दा उनी हरा ...